Nubia Red Magic Watch dia famantaranandro vaovao miaraka amin'ny fizakan-tena hatramin'ny 15 andro | Androidsis
Ny mpanamboatra Nubia dia nanambara ny iray amin'ireo lozam-pifamoivoizany voalohany amin'ny tontolon'ny smartwatch, taorian'ny nanambarana ireo finday avo lenta vaovao Nubia Red Magic 6 sy Red Magic 6 Pro Tencent. Nubia Red Magic Watch dia famantaranandro marani-tsaina natao hanoloana ireo teo aloha, Nubia Watch ary Nubia Alpha.
Ity maodely ity dia miavaka amin'ny fananana fizakan-tena mihoatra ny roa herinandro raha ampiasaina dia manome fiasa mahavariana azy io, tsy misy fanjana amina endrika AMOLED. Mikasa ny hivarotra singa marobe amin'ity famantaranandro ity ny orinasa amin'ny fanombohana izay hatao any Shina amin'ny voalohany.
1 Nubia Red Magic Watch dia natsangana haharitra
2 Fahaleovan-tena nandritra ny fotoana ela
Nubia Red Magic Watch dia natsangana haharitra
El Nubia Red Magic Watch dia nanapa-kevitra ny hametraka efijery 1,39-inch Karazana AMOLED miaraka amina vahaolana 454 x 454 teboka ary voaaro amin'ny ravina Gorilla Glass kely. Vita ny dial, miaraka amina lafiny sasany mivoaka hanome endrika sporty an'ity smartwatch vaovao ity.
Ny fehy dia azo vidiana amin'ny silicone na hoditra, ny mpanjifa dia afaka manapa-kevitra amin'ny loko marimaritra iraisana rehefa mividy azy. Manana fanoherana rano 5 ATM izy io, sahabo ho 50 metatra sy mahazaka karazan-tsipika rehetra noho ilay ravina Gorilla Glass voalaza etsy ambony.
Ny fifandraisana dia Bluetooth amin'ny fifandraisana amin'ny telefaona, Izy io dia miaraka amin'ny GPS atambatra, maodely fanatanjahan-tena 16, fandrefesana oksizenina amin'ny rà ary ny fizakantena dia 15 andro eo ho eo ampiasaina. Izy io dia misy sensor PPG (sensor optika dia mandrefy ny taratry ny hazavana, izay miova, ankoatry ny zavatra hafa, miankina amin'ny fikorianan'ny rà mandalo teboka manazava).
Fahaleovan-tena nandritra ny fotoana ela
Stack an'ny Nubia Red Magic Watch dia mampanantena fahaleovan-tena mandritra ny 15 andro amin'ny fampiasana ara-dalàna, raha fohy kokoa izany dia miankina amin'ny fampiasana azy io matetika amin'ny fanatanjahan-tena. Ny lafiny iray hanasongadinana dia ny fitsitsiana angovo raha mbola tsy mampiasa ny tontolony isika.
Ny bateria misaraka dia azo havaozina amin'ny alàlan'ny charger USB-C, manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 100% ao anatin'ny adiny iray ary eo amin'ny roapolo minitra vao vita. Nubia famantaranandro majika mena Manolotra famolavolana famantaranandro mahazatra izy io, miaraka amina dial dial ary avo lenta ny bateria, hoy izy ireo fa 300 mAh eo ho eo.
FANDRAISAN'NY MPANORA MAORA NUBIA
SCREEN AMOLED 1.39-inch miaraka amina vahaolana 454 x 454 pixel / fiarovana Gorilla Glass
Sela Mpandray Hafanana Sensor PPG
CONNECTIVITY GPS / Bluetooth
BATERA Mahatratra 15 andro
Software Fomba fanatanjahan-tena 16 / fandrefesana oxygen oxygen
DIMENSION SY lanjan'ny Gramin'ny 30
El Nubia Red Magic Watch dia manana vidiny roa samy hafa Miankina amin'ny kinova nofidinao, 599 yuan (72 euro eo ho eo novaina) ho an'ny kinova silika ary 699 yuan ho an'ny kinova hoditra (eo amin'ny 90 euro). Amin'izao fotoana izao, ny daty fandefasana any Espana dia tsy fantatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Nubia Red Magic Watch dia famantaranandro vaovao manana fizakan-tena hatramin'ny 15 andro
Tsy mitsahatra mivarotra ny solomaso Google Cardboard i Google
Nohavaozina ny Instagram Lite ary manampy ny fiasa Reels